कुलमानले भ्रष्टाचार गरेकै हुन त ? संसदमै उठ्यो यस्तो माग ! - नयाँपुल अनलाइन डटकम
सत्तारुढ नेकपाका सांसद तथा पूर्व उद्योग मन्त्री महेश बस्नेतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई अख्तियार लगाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् ।
मंगलबार बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले सार्वजनिक लेखा समितिले पनि घिसिङमाथि छानबिन गर्नुपर्ने माग गरेका हुन् । प्राधिकरणले ९ अर्ब बढी बक्यौता नउठेको विषयमा नेकपा सांसद अमनलाल मोदीले प्रश्न सोध्दा नानाथरी आरोप लगाएको भन्दै घिसिङलाई छानबिन गर्न बस्नेतले माग राखेका हुन् ।
उनले भने,‘भारतबाट खरिद गरिएको पथलैया ट्रान्समिसन लाइनबाट २२५ मेगावाटको प्रयोग गरे पनि नगरे पनि १० रुपैयाँ ६८ पैसा तिर्नुपरेको छ । यी कुरा उठाउँदा मोदीमाथि सामाजिक संजालले तल्लो स्तरमा ओर्लेर गाली गरेको सुनियो ।’
उनले कुलमान घिसिङले पनि उक्त गाली गलौचलाई बढावा दिएको बताउँदै भने,‘कुलमानजीले पनि मलाई अनेक आरोप लगाइयो, घेराबन्दी गरियो भनेको पाइयो । कुलमानजीले गरेका काममा हाम्रो साथ सहयोग र समर्थन छ । मोदीजीले उठाएका विषय गम्भीर छन् ।’
अमनलाल मोदी भन्छन्ः मैले कुलमानलाई भ्रष्ट्राचारी भनेर ठोकुवा नै त गरेको छैन नि !
नेकपा नेता तथा सांसद अमनलाल मोदीले आफुले विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भ्रष्टाचार नै गरेको भनेर ठोकुवा नगरेको बताए । बुधबार एक टेलिभिजनमा अन्तरवार्ता दिँदै मोदीले प्राधिकरणले उठाउन बाँकी बक्यौता रकमको बारेमा आफुले प्रश्न मात्र गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
राज्यको ढुकुटीमा नौ अर्बभन्दा धेरै रकम बक्यौता रहेको र त्यसमा आफुले प्रश्न गरेको बताएका छन् । ‘प्रश्न गर्ने अधिकार सबैमा हुन्छ’, उनले भने, ‘सार्वजनिक लेखा समितिको वैठकमा छलफलको एजेण्डा बनेपछि मैले प्रश्न गरेको हुँ ।’ छलफलको क्रममा विगत तीन बर्षदेखिको बक्यौता कुल नौ अर्ब उठाउन बाँकी रहेको र त्यसमा कतै घिसिङकै मिलिभगत त छैन भनि आफुले प्रश्न गरेको बताए ।
एक बर्षभन्दा अगाडीको डाटा रेकर्डमा नहुने विद्युत प्राधिकरणले नै भनेको आधार मान्ने हो भने नौ अर्ब बक्यौता रकम कसरी उठाउने भन्ने प्रश्न पनि घिसिङमाथि उठ्ने बताए । जनताको रगत र पसिनाको पैसा राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुनुपर्ने आफ्नो माग रहेको उनले बताए । त्यति ठुलो रकम बैँकमा जम्मा भएको भएपनि निकै धेरै ब्याज जम्मा हुने र त्यसलाई विकास निर्माणको काममा लगाउन सकिने उनले बताए ।
कुलमान घिसिङकै कार्यकालमा त्यति धेरै बक्यौता रकम उठ्न बाँकी रहेकाले उहाँमाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाविक भएको समेत मोदीले बताएका छन् । कुलमान घिसिङमाथि लगाउनुभएको भ्रष्टाचारको आरोप पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ? भन्ने प्रश्नमा आफु कसैलाई भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्ने व्यक्ति नभएको बताएका छन् । उनले भने, ‘जुनदिन प्राधिकरणले नौ अर्ब बक्यौता रकम उठाउन सफल हुन्छ त्यसदिन म आफै कुलमानलाई फुलमाला लगाएर सम्मान गर्छु ।’
भ्रष्टाचार प्रमाणित भए झुण्डेर मर्छु भन्ने कुलमानको अभिव्यक्ति स्वागतयोग्य रहेको समेत अमनलाल बताउँछन् । उनि भन्छन्, कुलमानले झुण्डेर मर्नुपर्दैन केबल नौ अर्ब बक्यौता रकम उठाए पुग्छ ।’
जोसुकै उद्योगपति र जतिसुकै ठुला नेताहरुसंग साँठगाँठ भएतापनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर र महशुल तिर्नैपर्नेमा सांसद मोदीले जोड दिए । आफुले विद्युत प्राधिकरणको बारेमा प्रश्न उठाउँदा धेरै मानिसहरुले आफुलाई गालि गरेको र सामाजिक संजालका भित्ताहरुमा श्रद्धाञ्जली समेत दिएको भएतापनि आफुलाई त्यसले कुनै असर नपार्ने र एकदिन सत्यको जित हुने समेत बताए ।
उनले व्यक्तिगत रुपमा कुलमानप्रति कुनै किसिमको रिस राग नभएको बताए । कुलमान घिसिङले लोडसेडिङ अन्त्यका लागि महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरेको र उनको भुमिका तारिफ योग्य भएको बताए । तर, एउटा राम्रो काम गरेको व्यक्तिलाई धेरै नराम्रो काम गर्ने छुट पनि राज्यले नदिएको बताए । राम्रो काम गर्ने मानिसहरुविरुद्ध प्रश्न नै उठाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था पनि नरहेको स्पष्ठ पारे ।
सांसद मोदी आफुले घिसिङ र सिडिओ संग पाँच लाख रकम मागेको भन्ने कुराहरु पनि भ्रामक र आधारहिन भएको बताउँछन् । जब आफुले कुलमान बिरुद्ध प्रश्न उठाए तब आफुबिरुद्ध भ्रम फैल्याइएको समेत आरोप लगाएका छन् । उनले आफुविरुद्ध लगाइएको आरोप प्रमाणित भए टुँडिखेलमा गएर सार्वजनिक रुपमा आत्मदाह गर्ने समेत चुनौती दिए ।
यो पनि पढ्नुहोस्:–
भ्रष्टाचारी भन्ने मोदीलाई कुलमानले यसरी लगाए ४४० भोल्टको झड्का !
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना ग्राहकको संख्या आक्रामक रुपमा बढाएको छ । साढे २ बर्षको समयमा प्राधिकरणले ११ लाखभन्दा बढी ग्राहललाई मिटर वितरण गरेको छ ।
३ वर्ष अघिसम्म प्राधिरकणले वर्षमा मुस्किलले १ लाख मिटर वितरण गर्ने गरेको थियो । कुलमान घिसिङ प्राधिकरणको नेतृत्वमा आएपछि प्राधिकरणले आवस्यकता अनुसार ग्राहकलाई मिटर उपलब्ध गराउँदा ग्राहकको संख्या ह्वात्तै बढेको हो ।
प्राधिरकणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार साढे दुई वर्षको अवधिमा ६५ बाट ७८ प्रतिशतसम्म राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको छ । यसैको बलमा प्राधिकरणले ग्राहकको संख्या आक्रामक रुपमा विस्तार गर्न सकेको हो ।
प्राधिरकणले ग्रामीण विद्युतीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेर लाइन नपुगेका क्षेत्रमा बिजुली सेवा पुर्‍याइरहेको छ । यसका लागि दातृ निकायले पनि सघाउँदै आएका छन् भने प्राधिरकणले आफैं पनि बार्षिक रुपमा बजेट छुट्याएर विजुली सेवा विस्तारको काम गरिहरेको छ ।
अढाई वर्षमा करिब १२ प्रतिशतले विद्युत सेवा विस्तार गर्न सफल भएको प्राधिरकणले अबको ४ वर्षमा देशका सबै सम्भाब्य भागहरुमा बिजुली पुर्याइसक्यो लक्ष्य लिएको थियो ।
विद्युत चुहावट नियन्त्रण, प्रशासनिक र वित्तीय सुधारका लागि चालिएका कदमबाट आर्थिक वर्ष २०७३÷७४मा प्राधिकरणले १ अर्ब ४६ करोड ७३ लाख रुपैयाँ खुद संस्थालाई नाफा कमाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा नाफा बढेर झण्डै ३ अर्ब पुगेको छ ।
यसैबीच, केही दिन अगाडी सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ नेकपाका सांसद अमनलाल मोदीले कुलमानलाई ९ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएका थिए । जसको सामाजिक सञ्जाल लगायत सञ्चारमाध्यममा व्यापक आलोचनाको सिकार बनेका थिए सांसद मोदी । कुलमानलाई त्यस्तो आरोप लगाउने मोदीलाई कुलमानले व्याक टु ब्याक राम्रा काम गर्दै गएपछि ठूलो झड्का लागेको हुनुपर्छ ।
कुलमानलाई भ्रष्टाचारी भन्ने मोदीलाई चर्चित क्याप्टेन बिजय लामाले दिए यस्तो कडा दनक !